Ny fomba fiasan'ny orinasa misokatra amin'ny asa sy ny fisokafana ary ny fanajana ny talenta dia nahasarika olona maro any ampitan-dranomasina,
Talenta ambony avy amin'ny orinasa Fortune 500 sy orinasa an-toerana miavaka.
Ny fampandrosoana mitohy sy haingana ny orinasa dia namorona fitakiana tsy tapaka ho an'ny talenta
Ity misy sehatra tena tsara ahafahana manatratra ny asa sy ny nofinofy!
Politika momba ny mpiasa
● Karama sy tombontsoa:
Miaraka amin'ny karama mifaninana amin'ny indostria sy ny faritra, ny talenta miavaka dia tsy vitan'ny hoe mahatsapa ny fahombiazany amin'ny asany, fa koa ny fiverenana ara-drariny amin'ny tombontsoa.Ny orinasa amin'izao fotoana izao dia manome karazana fiantohana dimy ho an'ny mpiasa: fiantohana ratra amin'ny asa, fiantohana amin'ny reny, fiantohana tsy an'asa, fiantohana fanafiana masina ary fiantohana ara-pahasalamana.
Ny orinasa dia miaro ny tontolo iainana fifaninanana "ara-drariny, ara-drariny ary misokatra", ary miezaka ny hahatonga ny mpiasa rehetra ao Guansheng hanana toerana ho an'ny fampandrosoana maharitra;
Ny rafitra fanombanana famporisihana mahomby dia manatratra ny tanjon'ny fiaraha-miasa, mikatsaka ny tsara indrindra ary mizara vokatra amin'ny alàlan'ny fiderana, fanomezana valisoa ary fanomezana fahafaham-po amin'ny fampivoarana asa maharitra ho an'ireo mpiasa manana fahombiazana miavaka.
Ny orinasa dia tsy mitsahatra mampiditra sy manofana talenta, manome sehatra fampivoarana asa feno ho an'ny orinasa, fahaiza-manao ary fitantanana, manana programa fanofanana anatiny sy ivelany sy programa fanofanana mirindra sy feno, manome fahafahana sy tontolo iainana ho an'ny fampandrosoana sy ny fitomboan'ny mpiasa tsirairay, amin'izany ny fametrahana mahomby. , Mpiasa mavitrika sy marin-toerana.